UHezekile 13 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
2 Nyana womntu, profetaprofeta uchase abaprofetiabaprofeti bakwaSirayeli abaprofetayo, uthi kwabaprofeta okwentliziyo yabo, Liveni ilizwi likaYehova.
3 Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Yeha ke, abaprofetiabaprofeti abanobudenge, abalandela owabo umoyaumoya, nento abangayibonanga!
4 Baba njengeempungutye emanxuweni abaprofetiabaprofeti bakho, SirayeliSirayeli.
5 Aninyukanga niye emathutyeni, niyibiyele ngodonga indluindlu kaSirayeli, ukuze nakhe uluhlu lokulwa ngomhla kaYehova.
6 Babona into ekhohlakeleyo nokuvumisa okungamanga, abo bathi, UtshoUtsho uYehova; uYehova engabathumanga, ukanti balinda ukuqiniswa kwelo lizwi.
7 Anibonanga mbono wankohlakalo na, nakuvumisa okungamanga na, nisithi nje, UtshoUtsho uYehova; ndingathethanga mna?
9 IsandlaIsandla sam sichasa abaprofetiabaprofeti ababona into ekhohlakeleyo, bavumise amanga. Abayi kubakho ekucweyweni kwabantu bam, bangabhalwa encwadini yomlibo wendlu kaSirayeli, bangangeni emhlabeni wakwaSirayeli; nazi ukuba ndiyiNkosi uYehova.
10 Ngenxa yokuba, ewe, ngenxa yokuba bebandwendwisile abantu bam, besithi, Luxolo, kungekho luxolo; bathi, bakwakha udongaudonga bona, yabona, abaya balutyabeka ngodaka oluhlephukayo:
11 yithi kwabatyabeka ngodaka oluhlephukayo, Luya kuwakuwa; kuza isiphango esikhukulayo; nina ke, matye esichotho, yiwani; wena moya usisaqhwithi, ovuthuvuthuzayo, qhutha.
12 Xa ke luthe lwawa udongaudonga, akuyi kuthiwa na kuni, Kuphi na ukutyabeka enatyabeka ngako?
13 Ngako oko itsho iNkosi uYehova ukuthi, Ndiya kuqhuthisa umoyaumoya ovuthuvuthuzayo ngobushushu bam; kuze nesiphango esikhukulayo ngomsindo wam, namatye ezichotho ngobushushu, ukuze kugqityelwe kuphele.
14 Ndiya kulugungxula udongaudonga enalutyabeka ngodaka oluhlephukayo, ndiluwise emhlabeni, sityhilekile isisekoisiseko salo, luwe, niphelele kweso sithuba salo; nazi ukuba ndinguYehova.
15 Ndobuphelelisela eludongeni ubushushuubushushu bam, nakwabatyabeka ngodaka oluhlephukayo, ndithi kuni, Alusekho udongaudonga, abasekho abatyabeki balo,
16 abaprofetiabaprofeti bakwaSirayeli ababeprofeta ngeYerusalem, ababebona umbonoumbono woxolo, kungekho luxolo; itsho iNkosi uYehova.
17 Wena ke, nyana womntu, bhekisa ubusoubuso bakho kwiintombi zabantu bakowenu, eziprofeta okweentliziyo zazo.
18 Uze uprofete ngazo, uthi, Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Yeha ke, abo bathunga izibophelelo ezihlahleni zezandla zonke, benze izigubungelo ezilingene iintlokoiintloko zonke, ukuze bathiyele imiphefumloimiphefumlo! Nithiyele imiphefumloimiphefumlo yabantu bam, nasindisa eyenu imiphefumloimiphefumlo.
19 Nindihlambele kubantu bam ngenxa yerhasi esutywe ngezandla, nangenxa yamaqhekeza esonka, ukuze nibulale imiphefumloimiphefumlo ebingeyakufa, nisindise imiphefumloimiphefumlo ebingeyakusindiswa, ngamanga enu ebantwini bam abava amanga.
20 Ngako oko itsho iNkosi uYehova ukuthi, Yabonani, ndizichasile izibophelelo zenu, enithiyela ngazo imiphefumloimiphefumlo njengeentaka. Ndiya kuziqhawula ezingalweni zenu, ndiyindulule imiphefumloimiphefumlo, kwaimiphefumlo eniyithiyeleyo njengeentaka.
22 Ngenxa enokuba niyenze buhlungubuhlungu ngobuxoki intliziyointliziyo yelungisa, endingalenzanga buhlungubuhlungu mna; nazomeleza izandlaizandla zongendawo, ukuze angabuyi endleleni yakhe embi, asindiswe:
1 Kumkani 22:12, 15
IiNdumiso 87:6, 95:11, 101:7
ImiZekeliso 17:15, 28:21
UIsaya 5:20, 28:17, 18, 30:13
NguYeremiya 5:31, 6:14, 14:14, 15, 23:9, 14, 19, 28:1, 15
IZililo 2:1, 3, 4, 14, 5:18
UHezekile 12:24, 13:2, 17, 14:9, 20:38, 22:27, 28, 30, 34:10
UMika 1:6, 3:5, 6
UMateyu 7:27, 24:5
2 Petros 2:14